ဒီဇင်ဘာ 2021 – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
Monthly Archives: ဒီဇင်ဘာ 2021
ZIO နှင့် Magic Scrolls Cheats&Hack
“မှော်ပညာသည် လူသားများအတွက် ဖြစ်ရမည်။!” မှော်စာလိပ်များသည် သာမန်လူသားများကိုပင် မှော်ပညာကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။!Zio ဖန်တီးထားတဲ့ မှော်စာလိပ်တွေရှိနေသရွေ့ သင်လည်း ကမ္ဘာ့အသန်မာဆုံး မှော်ဆရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။! —————————————————————————————-မှော်ဆန်သောမြေ 'Aerok' ကိုကျော်မှမှော်ဆရာများနှင့်သူရဲများအကြားစစ်ပွဲတွင်…'ဦးလေး’ အပြင်းထန်ဆုံးသော့ခလောက်ကို တံဆိပ်ခတ်ရာတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည်။သို့သော်လည်း၊, အများစုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, မှော်, Scrolls, ZIO
Poppy လာကြတယ်။ – သူတို့ကို ခေါက်လိုက်ပါ။! လှိုင်သာယာ&Hack
Poppy Punch သည် Poppy တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။! ကွေးကောက်သော လက်သီးဖြင့် ကွင်းထဲမှ လူတိုင်းကို ခေါက်ပါ။. တစ်ဦးတည်းသာ အောင်နိုင်သူဖြစ်နိုင်သည်။! သင်နှင့်အခြားပြိုင်ဘက်များသည် Poppy များဖြစ်သည်။. တိုက်ခိုက်ရေးသမားအားလုံး ကွင်းထဲမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကြမယ်။, လူတိုင်းသည် မိမိအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြလိမ့်မည်။! မင်းရဲ့တာဝန်က ပြိုင်ဘက်အားလုံးကို ချေမှုန်းပစ်ဖို့ပါပဲ... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Knock, Poppy, Punch
ဓားဆရာကြီး: Ragdoll Fight 3D လှည့်စားမှုများ&Hack
Sword Master တွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ တိုက်ပွဲများအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား: Ragdoll Fight 3D? သင်ကိုယ်တိုင် ဓား၏ ragdoll master ဖြစ်လာရန် အချိန်တန်ပြီ။! ဂိမ်းကစားခြင်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။. ရှစ်ယောက်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး ရန်သူအားလုံးကို ဖြတ်ဖို့ ဓားနဲ့ ပျံသန်းပါ။. သော့ကိုရှာပြီး ဝင်္ကပါထဲက ထွက်လိုက်ပါ။. သင်၏ဓားသည် TNT စည်များကို ပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်။, အုတ်များကိုချိုးပါ။,… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, တိုက်ပွဲ, သခင်, Ragdoll, ဓားရှည်
ကွဲပြားမှုတွေကို ရှာဖွေရာမှာ ပါရမီရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့ ပဟေဋ္ဌိဂိမ်းအသစ် 'I Spotted It' ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ပုံများတွင် မတူညီမှုများကို ရှာဖွေကြည့်ပါ။ ခမ်းနားသော အဆောက်အဦများနှင့် လှပသောရှုခင်းများ, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာများ, တန်ဖိုးကြီးကားများနှင့် ချစ်စရာတိရစ္ဆာန်များသည် ဤဂိမ်းတွင် သင့်အား စောင့်ကြိုနေပါသည်။! ဒါက မင်းရဲ့ ယုတ္တိတွေးခေါ်မှုကို လေ့ကျင့်ဖို့ အကောင်းဆုံးဂိမ်းပါ... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
Poppy Hide 'N Seek – လှိုင်သာယာ&Hack
Poppy Hide 'N Seek Playtime, ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ လှည့်ကွက်အနည်းငယ်ပါသော ကောင်းသော ဂန္တဝင် ပုန်းရှာဂိမ်း. Huggy Wuggy မှ ပုန်းအောင်းပြေးပါ သို့မဟုတ် အခြားကစားသမားများကိုဖမ်းရန် Huggy ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။. ရှာပါ သို့မဟုတ် ရှာပါ။, သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်! ပုန်းအောင်းသူအဖြစ်, ကူညီနေစဉ် Huggy ၏လက်မှ အမြန်ပြေးရပါမည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, hide, Poppy, seek
Pop Pop ဘောလုံးများ – လှိုင်သာယာ&Hack
Pop Pop Balls များဖြင့် သင်၏ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအချိန်များတွင် ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ! ဒီဂိမ်းကိုကြိုက်ရင်, ကျေးဇူးပြု၍ သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် မျှဝေပြီး အတူတူ ပျော်ရွှင်ပါစေ။! စည်းကမ်းများသည် ရိုးရှင်းပါသည်။:1、တူညီသောနံပါတ်2နှင့်ဘောလုံးများကိုပေါင်းစည်းပါ။、သင် 23 ကို ပေါင်းလိုက်သောအခါ ပိုမိုမြင့်မားသော နံပါတ်ဘောလုံးများကို ရယူလိုက်ပါ။、နံပါတ်အသစ် Balls Merge ဝန်ဆောင်မှုများသို့ ရယူပါ။:1、အံဝင်ခွင်ကျ ဒီဇိုင်း & အံ့သြဖွယ်ဂိမ်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ၂、သင်ယူရန်လွယ်ကူသော… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): Balls, မင်္ဂလာပါ, POP
ဘိန်းစား ရင်ထိတ်တယ်။: အခန်း ၁ – လှိုင်သာယာ&Hack
ပဟေဋ္ဌိအားလုံးကို သင်ဖြေရှင်းပြီး ဤစွန့်ပစ်ထားသောစက်ရုံကို အသက်ရှင်လျက် လွတ်မြောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါသလား။? Huggy ဟု အမည်ပေးထားသည့် ဒဏ်ပေးအရုပ်သည် ဤဝင်္ကပါတွင် သင့်အား စောင့်နေသည်။. လျှပ်စစ်ဆားကစ်များကို ဖောက်ထွင်းရန် သို့မဟုတ် အဝေးမှ မည်သည့်အရာကိုမဆို ရယူရန် သင်၏ အစွမ်းထက်သော အပြာရောင်လက်နှင့် လက်နီကို အသုံးပြုပါ။. လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအဆောက်အအုံကို စူးစမ်းပါ။… ဖမ်းမမိပါစေနှင့်! ဂိမ်းတစ်လျှောက်လုံး, မင်း… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): အခန်း, မင်္ဂလာပါ, Horror, Poppy
Huggy Stretch ဂိမ်း – လှိုင်သာယာ&Hack
ဆန့်ထုတ်ပဟေဠိဂိမ်းအသစ်သို့ ကြိုဆိုပါသည်။. Huggy Stretch Game ဂိမ်းကို ကစားပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ပဟေဋ္ဌိဂိမ်းအသစ်များကို အဆင့်ဖြည့်ခြင်းဖြင့် Huggy ကို ကယ်တင်ကြပါစို့. ❄️ အကြမ်းထည်ဂိမ်းများ ကစားနည်း:• ဦးတည်ရာသို့ရောက်ရန် ခြေထောက်များ သို့မဟုတ် လက်များကို ဆန့်တန်းပြီး နှိပ်ပါ• စည်းကမ်းသည် အလွန်အကျွံမဆန့်ရပါ။, အရမ်းသတိထားမနေပါနဲ့... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, ဂိမ်း, Huggy, Stretch
Fury Battle Dragon – လှိုင်သာယာ&Hack
နဂါးအော်သံသည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို တုန်ခါနေသည်။,ပြီးတော့ စွမ်းရည်က အားကောင်းပြီး လှတယ်။ အဝေးကနေ, ခေါင်းလေးလုံးပါသော နဂါးတစ်ကောင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကြားတွင် ဂုဏ်ယူစွာရပ်နေပါသည်။ ၎င်း၏ခေါင်းလေးလုံးသည် မတူညီသောဒြပ်စင်များ၏ စွမ်းအားကို စုစည်းထားသည်။, မီးအပါအဝင်, မိုးကြိုး, အေးခဲပြီး လျှပ်စီးလက်သည်။ မှော်နဂါးသည် ၎င်း၏ အစွမ်းထက်သော ဒြပ်စင်စွမ်းအားကို သက်သက်မဲ့ သုတ်သင်ပစ်လိုက်သည်။, ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောလူသားများသည် နဂါး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာကြသည်။ ... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): တိုက်ပွဲ, မင်္ဂလာပါ, DRAGON, Fury
ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ2– လှိုင်သာယာ&Hack
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုသည် ဗျာဒိတ်ဌာနသို့ ရောက်လာသည် — ကပ်ဆိုးကြီး ရောက်ရှိလာတော့မည်။. ဖောက်ပြန်နေသော စုန်းမကြီးသည် ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ရန် သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးတော့မည် ... "ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ: Cataclysm" သည် Hidden Objects အမျိုးအစားရှိ စွန့်စားခန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။, မီနီဂိမ်းများနှင့် ပဟေဠိများစွာဖြင့်, မမေ့နိုင်သောဇာတ်ကောင်များနှင့် ရှုပ်ထွေးသောရှာဖွေမှုများ. ဗျာဒိတ်ရူပါရုံတစ်ခု ရောက်ရှိလာသည်။. A… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, ဒဏ္ဍာရီ, ပုံပြင်များ